Fandrobana tany Toamasina :: Andian’olona nirongo basy nanafika banky • AoRaha
Fandrobana tany Toamasina Andian’olona nirongo basy nanafika banky
Notafihin’ny andian-jiolahy nitam-basy ny banky iray tany amin’ny Bazarikely Toamasina, omaly antoandro. Tsy mbola nahenoana tatitra ny fitambaran’ny vola voaroba. Fantatra kosa fa tsy nisy ny olona naratra na namoy ny ainy tamin’izao fanafihana izao.
Miisa enina ireto jiolahy nanafika banky ireto. Nisy ny niditra tao anatiny nampihorohoro sy nandraoka ny vola. Ny sasany niandry teny ivelany niomana hitondra ny naman’izy ireo handositra.
Basy poleta vita tanana no fantatra fa hita teny an-tanan’ireo jiolahy, araka ny fitantaran’ny mpitandro filaminana any an-toerana. Tsy nanapoaka izany anefa izy ireo fa nentina nampitahorana ny olona fotsiny ihany.
«Ekipan’ireo jiolahy efa mpanafika eto Toamasina ihany ireto nangalatra tao amin’ny banky ireto. Mitovitovy ny fomba fiasan’izy ireo. Noraofin’ireo mpanafika ny entana rehetra teny amin’ny olona sendra tao amin’ny banky, toy ny finday sy paoketra ary kitapo. Tsy voafaritra mazava kosa ny volan’ny banky voaroba», hoy ny polisy any Toamasina.
Fahoriana tampoka tetsy Tsimbazaza :: Ejipsiana mpianaka niara-maty tao an-trano
Lehilahy iray voarohirohy ho nanapitra ny ain’ny namany